Bara hamaa, bara Gollobaan seene Oromoon maal godha? – Awash Times
Akka duudhaa isaa Oromoon bara hamaan dhufee dhukkubni hamaan, gollobaaf wanni dur hinjirre yoo dhalate bayee waaqa isaa kadhatee falata.
Kanallee kan godhan akka ollaa ykn naannaa jiraniitin maanguddoon mari’atu. Iddoo waloo kan itti fala akkanaa godhatan kan beekamu duruma qabu. Malkaa guddaa, hora yookan tulluu yookanis odaa akkasuma abdaarii qeyee ofiitis t’u iddoo itti kadhatan akka namuu hinhafnetti guyyaa qabatanii walyaamanii dhaqu.
Iddoo itti Waaqa ofiititti iyyatan kana kan dhaqan maanguddoota qofa miti, jaartii cifiree, jaarsa korboo, daa’ima xiqqaa, dubara qarree, dargaggeessi qeerron osoo hinhafin dhaqu. Dabalataanis hortee ofii qabatanii dhaqu. Hormaata ofii keessaa farda fe’anii dhiyeeffatu. Fardis eega fe’amee booda luugama afaanii osoo hinbaasin dhaabu.
Eega kuni tarreeffameen booda osoo Waaqa waliin dubbii hinjalqabin ofii waliin dubbatu. Maanguddoon duratti bayee Waaqni akka nu dhagahu garaa qulqulluudhan kadhachuu qabnaa, kanaafuu namni waldhabdee qabdan, kan walirraa mufoo qabdan waliif dhiisaa jedhu. Namni tokko osoo hinhafin kan dur waloles sababa kanaan harka walfuudha. Namni mufoo (goomii) garaatti qabatte osoo dhiifama hinjedhin hafte nuyii mitii Waaqa sobde, kanaaf goomii kee fixadhu jedhee jaarsi isa dhumaa akeekkachiisa. Kan didee tures yoona nama waldhabe bira dhaqee harka. Guyyaa kana harka walfuudhuu malee, achumatti yoosuu waliif dhiisuu malee yeroon itti walhimatan hinjiru.
Eega namuu quurrama qabu fixatee booda harka Waaqatti of qabanii
Yaa Waaqa hamaa kee jala nu baasi,
kan mirgaan fidde bitaatti, kan bitaan fidde mirgatti jala nu baasi.
Dhukkuba hamaa, gollobaa hamaa,
hafuura hamaa jala nu baasi
Nuti uumaa keetii, nu uumtee nu hinfixin.
jedhanii Waaqa mararfatanii booy’anii kadhatu.
Kanatti aansee jaarsi nicaraana. Caraanuu jechuun Waaqatti iyyanii dubbachuudha. Sagalee isaa sirriitti ol kaasee caraana:
“Maal Waaqa, nu fixxaa? Maaf nu uumtee dhukkubaan nu fixxa? Maal si balleessinee nu fixxa?” jedhee alangee ofii ol mirmirsee Waaqatti caraana.
Kuni martuu eega xumurameen booda dhibaayyuu fidan irraa jigsuudhan, daddarbaa fidan daddarbuudhan kan qalanis yoo qopheessan qaluudhan waaqa isaaniitiin araara kadhatu.
Waaqni waan balleessinetu jiraa nuun lole jedhanii waan yaadaniif kan nuti balleessine nuuf dhiisi, hammeenya keenya nurratti hinlaalin jedhanii xumuru.
Ammallee bara dhukkubni vaayrasii koronaa dhufe kana kanuma godhaa jira.
Previous Post: በቴሌቪዥን ለሃይማኖት ተቋማት የተሰጠውን የአየር ጊዜ በተመለከተ ከአለም አቀፍ የዋቄፈና ጉባኤ የተሰጠ መግጫ
Next Post: Buusa fi Gonofaa – walgargaarsa bara rakkoo